Iningi lamaSpanishi aseMelika Likhathazekile Ngokuguquka Kwesimo Sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iningi lase-US Hispanics likhathazekile ngokushintsha kwesimo sezulu
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyinkinga yezemvelo emhlabeni wonke ethinta umuntu ngamunye ohlala emhlabeni. Kunabantu abazi futhi abanye abangazi. Kunemikhakha yabantu engacabangi ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kungaba usongo olusheshayo, kepha ukuthi, uma kuwusongo lwangempela, kuzoba esikhathini esizayo esikude lapho kungeke kube yithuba labo lokuthi bakuthole.
Kwenziwe ucwaningo lwamaSpanic ahlala eMelika ukuthola iphesenti labo abakhathazeke ngokweqiniso ngokuguquka kwesimo sezulu kanye nemiphumela yako emibi. Ukuvota kwenziwe ngemuva kokhetho lobumengameli baseMelika lapho anqoba khona UDonald Trump.
Lokhu kuvota kuveza ukukhathazeka kukaLatinos ngemvelo. Lokhu kukhathazeka sekuphindwe kathathu eminyakeni emine eyedlule, yize izingqinamba ezifana nomnotho, ukuqashwa kanye nemfundo kuyizinkinga ezinkulu ezikhathaza kakhulu abantu baseSpain. Ngokuya ngemiphumela yenhlolovo nocwaningo, Ama-88% abavoti baseSpain izwakalisa ukukhathazeka ngezinga lezemvelo nokuguquka kwesimo sezulu. Ukwephula lo mphumela, ama-53% ayavuma ukuthi kunjalo ukhathazeke kakhulu ngemiphumela esivele ibonakala futhi eseduze, Ama-24% akhathazekile ngandlela thile futhi eyedwa U-11% uzolile ngalesi sihloko.
Ukuvota kushicilelwe yizinhlangano ezivikela imvelo ISierra Club neGreen Latinos. Lezi zinhlangano ziphinde zigqamise ocwaningweni lwazo ukuthi ama-71% ama-Hispanics avote okhethweni akholelwa ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthobela iSivumelwano SaseParis ukuze kubhekanwe nemiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu. Kungakho iningi labavoti baseSpain libheka ukuthi kufanele kube yinto ephambili kuDonald Trump ukuqhubeka nezingxoxo kanye nemihlahlandlela Yesivumelwano SaseParis. Ngaphezu kwalokho, ezingeni lesifunda, banxusa umongameli ukuthi abeke imithethonqubo eqinile yokulwa nokungcola kwamanzi nomoya, kanye nemizamo emisha yokwandisa ukukhiqizwa nokuthuthukiswa kobuchwepheshe bamandla avuselelekayo.
Ekugcineni, izinhlangano zigcizelela ukuthi ukwesekwa kwalezi zinqubomgomo kumele kuhlale kungashintshiwe kuwo wonke amaqembu abantu abakha iMelika, kungakhathaleki ubulili, ubudala noma ubuhlanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Iningi lase-US Hispanics likhathazekile ngokushintsha kwesimo sezulu
ISiphepho u-Otto sihlasela iMelika Ephakathi
Umshayeli wamazinyo nodiza